काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गा रोक्काको निर्णय खारेज..
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस संक्रमित संख्या वृद्धि भएपछि काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिनेका लागि दिइने पास पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रने सवारी..
काठमाडौं । मास्क नलगाइकन हिँड्ने र सेनीटाइजरको प्रयोग नगर्नेलाई मोरङमा एक महिनासम्म कैद सजाय गरिने भएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्क र सेनीटाइजरको आवश्यकता..
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैकले कोभिड १९ ले कस्ता ब्यापार ब्यवसाय कति प्रभावित भए भनेर वर्गीकरण गरेको छ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सोमबार जारी निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको हो। अर्थतन्त्रको विभिन्न..
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार मध्यरातिबाट लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज राति १२ बजेबाट लकडाउन हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमका..
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार (आज) मध्यरातिबाट लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज राति १२ बजेबाट लकडाउन हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। सरकारले कोरोना संक्रमणको..
मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्डमा २०० भन्दा बढी पहिरो : पृथ्वी राजमार्ग खोल्न दुई दिन लाग्ने
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्डमा साना–ठूला २०० भन्दा बढी पहिरो खसेका छन् । चितवन र धादिङ जोड्ने मौवाखोलाको पुल र सडक जोड्ने भाग नै बगाएको छ । सो खण्ड डिभिजन..
पुल बगाउँदा राजधानीसँग सम्पर्कविच्छेद, पृथ्वी राजमार्गको १० ठाउँमा पहिरो
काठमाडौं । अबिरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । धादिङ र चितवन जोड्ने मौवा खोला पुलको धादिङतर्फ पुलमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा..
सिन्धुपाल्चोक । लगातार वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले बगाउदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता भएका छन् ।बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं ५ जम्बुमा गएको बाढीका..
काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखाले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत मोबाइल, घडी तथा अन्य महङ्गो सामान सस्तोमा बिक्रीमा छ भनी विज्ञापन गरेर पैसा खातामा जम्मा गर्न लगाउने गिरोह सक्रिय भएकाले प्रलोभनमा नपर्न..
काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा नेपालमा थप ४२५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमा ३७५ पुरुष र ५० जना महिला रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा..
काठमाडौँ । सरकारले एक हप्तासम्म घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। सिंहदरबार बसेको उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको बैठकले ११ गते बिहान ६ बजेदेखि १८ गते बिहान ६ बजेसम्म घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने..
काठमाडौं । सरकारले भोलिदेखि एक सातासम्मका लागि देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि १६ चैत बिहान ६ बजेसम्म सर्वसाधारणलाई घरबाटि निस्किन नपाउने आदेश जारी गरिएको..
भोली विहान ६ बजेदेखि १८ गतेसम्म देशै लकडाउन, के गर्ने के नगर्ने ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ सम्म लागू हुनेगरी पूरै देश..
भोलिदेखि सरकारी कर्मचारीलाई घरमै स्ट्यान्डबाई राखेर कार्यालय बन्द गर्ने
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरूलाई घरमा स्टयान्डबाई बस्ने गरी भोलिदेखि विदा दिने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिले भोलिदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारी घरमै बस्ने..
कैलालीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
कैलाली । कैलालीमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा ९कर्फ्यु० जारी गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि कर्फ्यु जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बिहानैदेखि कैलालीमा बजार बन्द छन्..
आईतबारबाट कुन कुन कार्यालय बन्द हुँदैछ ?अत्यावश्यक सेवामा के के पर्छ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्दको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै चैत ९ गतेदेखि २१ गतेसम्म..
देशका सबै अदालत १५ दिनसम्मका लागि बन्द
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट बच्न मुलुभरका अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट दिइने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा २ साताका लागि बन्द हुने भएका छन्। सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाई गर्ने र पक्राउ अनुमति दिने..
सिनेमा हल, जीम हल र डान्स बार बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सिनेमा हल, खेलस्थल, जीम, डान्स बार तथा क्लब लगायतलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय..
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको नामको सूची सार्वजनिक
काठमाडौं । बेपत्ता छानबिन आयोगले १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएका २ हजार ५..
बरामद १० लाख मास्क सुपथ मूल्यमा किन्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले प्रहरीले बरामद गरेका १० लाख थान मास्कको डिजिटल दशी राखेर बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउने तयारी थालेको छ। यसका लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली सहितलाई बोलाएर..
अमेरिकी डीभी र गैरआप्रवासी भिसा बन्द
काठमाडौं । कोरोना भाइरसले अमेरिकालाई निकै प्रभावित बनाएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) र गैरआप्रवासी भिसा दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । दूतावासले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी भिसा अपोइन्टमेन्ट..
सावधान ! पैसाबाट पनि सर्छ कोरोना, चीनमा ८४ हजार करोड पैसा नष्ट गरियो
काठमाडौं । पैसाको माध्यमबाट कोरोना भाइरस सर्ने खतरा देखिएपछि छिमेकी मुलुक चीनमा गत फागुनमा करिब ८४ हजार करोड पैसा नष्ट गरियो । पैसाका माध्यमबाट कोरोना फैलने सम्भावनालाई न्यून गर्न चीन..
कुलमानमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ९ अर्ब ‘घोटाला गर्यो : लेखा समिति
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । लोडसेडिङ हटाउन निकै राम्रो काम गरेको भन्दै जनस्तरबाट वाहवाही पाएका घिसिङमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने..
भारतको आफ्नै नागरिकसहित सम्पूर्ण विदेशीलाई भारत प्रबेश गर्न रोक
एजेन्सी । भारतले मार्च १३ बाट लागु हुने गरी विदेशबाट भारत आउन खोजेका सम्पूर्ण आगमनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोनाभाइरस प्रकोपले महामारी रुप लिएपछि भारतले उक्त कठोर कदम उठाएको हो । भारतको..
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने प्रस्ताव संसदमा
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा कालापानीमा रहेका भारतीय सेना हटाउने विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेश हुँदैछ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले प्रस्ताव पेश गर्ने संसद सचिवालयले कार्यसूची..
बाँस्कोटाको घरमा आतंककारी समूहबाट बम प्रहार: प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको घरमा आतंककारी समूहले प्रेसर कुकर बम प्रहार गरी क्षति पुर्‍याएको बताएका छन्। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रचण्डले पार्टीका..
कतारको लागि श्रम स्वीकृति बन्द, करिब ३ हजार कामदार रोकिए
काठमाडौं । सरकारले कतारको लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । कतारले नै नेपालसहित १४ देशका नागरिकलाई प्रवेशमा अस्थायी प्रतिवन्ध लगाएपछि सरकारले पनि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको हो । वैदेशिक..
दैनिक २० हजार माक्स उत्पादन गर्ने, प्रतिपिसको मूल्य ७ रुपैयाँ मात्र
Posted on Mar 08 2020
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सर्जिकल माक्स उत्पादन गर्न शुरु गरेको छ । बजारमा माक्सको अभाव भएपछि चेम्बरले माक्स उत्पादन शुरु गरेको हो । चेम्बरले दैनिक २० हजार माक्स उत्पादन..
पहिलो पटक हङकङमा मानिसबाट कुकुरमा स¥यो कोरोनाभाइरस
एजेन्सी । हङकङमा कोरोनाभाइरसका एक रोगीको घरपालुवा कुकुरलाई भाइरस लागेको पुष्टि भएको छ । पहिलोपटक मानवबाट जनावरमा रोग सरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ६० वर्षीया महिलाको कुकुरलाई विगत शुक्रवारदेखि कोरोना लागेको..
Results 1994: You are at page 1 of 67
1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Next Last